Accueil > Gazetin'ny nosy > Mama sôsy : Omen’i Andry Rajoelina tombondahiny
Mama sôsy : Omen’i Andry Rajoelina tombondahiny
Inona loatra re ny fifanarahana nifanaovan’i Andry Rajoelina sy i Lalatiana Rakotondrazafy satria raha ny hita miharihary aloha, tao anatin’ny telo taona latsaka nijoroan’ity fitondrana ity, dia mahazo tombondahiny avy amin’ny filoham-pirenena i Mama sôsy raha samy minisitra ao anatin’ny governemanta. Maro ny departemanta misy eto amin’ny firenena, saingy ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina no tena mahazo vola betsaka hananganana fotodrafitrasa etsy sy eroa.
Iray amin’ireo vaovao nanamarika ny andron’ny omaly ny lanonana fametrahana ny vato fototra ny fotodrafitrasa lehibe vaovao hametrahana ny mozean’ny haino aman-jerim-panjakana (musée de l’audiovisuel public) sy ny “auditorium” na efitrano malalaka lehibe mahazaka mpijery 700. Ao amin’ny tokontanin’ny ORTM etsy Anosy moa no hanorenana ny fotodrafitrasa ary nanatrika ny lanonana mihintsy ny filoham-pirenena. Marihana fa tsy ratsy akory ny mozea na ny “auditorium”, saingy raha mijery ny toe-draharaha ara-toekarena sy ara-tsôsialy misy eto Madagasikara, ankehitriny, dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe : “izany ve no tena laharampamehana na ny tena andrasan’ny vahoaka izay sahiran-tsaina amin’ny fiainana andavan’andro, raha tsy hiresaka fotsiny ny fidangan’ny vidim-piainana ?”
Tao anatin’ny telo taona latsaka, nahazo tombodahiny betsaka tamin’i Andry Rajoelina i Lalatiana Rakotondrazafy ary izany no antony nahavitan’ny ministera nanangana tranoben’ny kolontsaina sy ny serasera amin’ny tanàn-dehibe maromaro. Tsiahivina fa vao nipetraka kelikely teo amin’ny fitondrana ny filoha am-perinasa dia nantsangana ny Akademiam-pirenena momba ny kolontsaina sy ny zava-kanto (ANAC) etsy Ambohitsirohitra izay nandaniana vola tsy toko tsy forohina kanefa tsy miantraika any am-bilanin’ny vahoaka Malagasy akory.
Raha ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena anefa dia tsy tokony ho ity ministeran’i Mama sôsy ity mihintsy no mahazo vola betsaka. Sady mahagaga fa isaky ny mitokana zavatra na mametraka vato fototra i Lalatiana Rakotondrazafy dia tsy maintsy manatrika eo foana ny filohan’ny repoblika. Ny fotodrafitrasa hafa mbola tsy vota akory toy ny ANAC etsy Ambohitsirohitra sy ny Colisé eny amin’ny Rovan’i Madagasikara kanefa fotodrafitrasa vaovao indray no hatsangana. Mazava ankehitriny fa i Mama sôsy no minisitra na mpanao politika ankafizin’i Andry Rajoelina indrindra eto Madagasikara.